Ndị nkuzi anyị - Cloud Library
Egosiputara n’inwe obi ike na mmasi, John Bevere bụ onye dere akwụkwọ ndị a na-ere ahịa dị ka ndị pụrụ iche, Ohu nke Ekwensu, Egwu Chineke, N’okpuru, na Ebighị Ebi n’akwoghari. A tụgharịala akwụkwọ ya n’asụsụ dị iche iche n’ihe karịrị otu narị, ma ihe omume onyonyo ya ọ na-enwe kwa izu, Onye ozi ahụ, ka a na-agbasa n’ụwa niile. John bụ ọkà okwu a ma ama na nnọkọ na ụka, ozi ya na-enyekwa ndị chọrọ ịghọta ma tinye ụkpụrụ Chineke n’ọrụ mgbanwe ndụ. John na-enwe obi ụtọ ibi na Colorado Springs ya na nwunye ya, Lisa, bụkwa onye ode akwụkwọ na onye kwuru okwu, ụmụ ha nwoke anọ, nwunye nwa, na ụmụ ụmụ.
Lee nbudata ndị dịnụ Ozi ịntanetị John Bevere
Ahụ n’anya. Onye enweghị obi. Onye a ga-akpasara nkata. Onye dị Ike. Onye na-akpa amụ. Okwu ndị a na-akọwa Lisa Bevere — ọkà okwu mba ụwa, onye odeakwụkwọ kachasị ree nke oma, yana onye na - ejikọ aka na mmemme telivishọn nke ozi ‘onye ozi’ nke na - agbasa n’ọtụtụ mba 200. N’ụdị na-egosi eziokwu, Lisa na-ekerịta The Messenger (Okwu Chineke) nke ọma site na ahụmịhe nke onwe iji nyere ndụ aka na nnwere onwe ma mgbanwe. Dị ka onye na-akwado ikpe ziri ezi, ọ na-akpọkọta ndị ọzọ ka ha bụrụ azịza maka nsogbu enweghị olileanya ndị nke dị na nso maọbụ ọ dị anya. Ọ na-atọ ya ụtọ ịnọkọ n’ịhụnanya nke ndụ ya, bụ John Bevere, na ụmụ ha nwoke anọ, ndị nwunye nwa dị ịtụnanya, na ụmụ ụmụ mara mma.
Lee nbudata ndị dịnụ Ozi ịntanetị Lisa Bevere